Terminology typography: Avy amin'ny Apex ka hatramin'ny Swash ary ny Gadzook Eo anelanelan'ny ... Ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao momba ny endritsoratra | Martech Zone
Alarobia, Martsa 16, 2022 Alarobia, Martsa 16, 2022 Douglas Karr
Ny fialamboliko lehibe indrindra nihalehibe, rehefa tsy nisy olana aho, dia ny manao sary. Nandany roa taona tamin'ny famolavolana drafitra aho fony aho tany amin'ny Lycée ary tiako izany. Mety hanazava ny antony ananako lahatsoratra na lahatsoratra momba ny sary, Illustrator, sary, ary lohahevitra momba ny famolavolana hafa. Ankehitriny dia typography sy ny famolavolana endri-tsoratra.
Typography sy ny asa fanaovan-gazety
Raha te-hihemotra amin'ny tantaran'ny endritsoratra sy ny typography ianao dia sarimihetsika kely mahafinaritra momba ny zavakanto very amin'ny Letterpress ity.
Ny Psychology of Fonts
Taorian'ny am-polony taona niasana tamin'ny asa pirinty sy an-tserasera, mino aho fa manana maso tsara amin'ny famolavolana lehibe aho ary ny endri-tsoratra dia manana anjara toerana lehibe amin'ny fanolorana marika iray, miteraka valiny ara-pihetseham-po. Raha ny tena izy…
Tsy ny fisehon'ny lahatsoratra ihany no heverina ho zava-dehibe ho an'ny marika, fa ny endriky ny endritsoratra samihafa dia mety hisy fiantraikany ara-tsaina amin'ny mpijery ihany koa. Amin'ny alàlan'ny fanovana ny endriky ny endri-tsoratra, ny fisafidianana endri-tsoratra mampihetsi-po kokoa na endri-tsoratra mahery vaika, ny mpamorona dia afaka manao izay hahatsapan'ny mpijery sy hamaly amin'ny fomba hafa amin'ny marika iray.
Mbola manana fisalasalana momba ny herin'ny endritsoratra? Misy mihitsy aza ny lahatsary miavaka manome ny tantaran'ny karazana endri-tsoratra sy ady hita ao amin'ny YouTube. Ary mazava ho azy, aza hadino ny mijery ny sarimihetsika Helvetica (amin'ny iTunes sy Amazon):
Karazana endri-tsoratra sy endrika typografika
Misy antsipiriany sy asa vita amin'ny famolavolana endritsoratra nataon'i Typographers. Ity misy horonan-tsary kely mahafinaritra momba ny typography… maro ny olona tsy mahafantatra ny asa rehetra amin'ny famolavolana endri-tsoratra sy ny maha-zava-dehibe ny anjara asan'ny endritsoratra amin'ny hafatrao.
Fanamarihana iray: Ity dia horonan-tsary tsara iray hanazavana ny fananana endritsoratra rehetra, saingy tsy dia tiako loatra ireo endritsoratra ampiasainy ao amin'ilay horonan-tsary. Te hizara izany aminao! Amin'izay ianao raha te hanazava amin'ny mpamorona anao fa mila toerana bebe kokoa eo anelanelan'ny litera ianao dia afaka miteny ny fitenin'izy ireo ary miteny hoe: “Azontsika atao ve ny manandrana mampitombo ny kerning?”
Mahavariana ahy ny typography. Ny talenta an'ny mpamorona mba hampivelatra endritsoratra izay miavaka ary afaka maneho fihetseham-po mihitsy aza dia tsy mampino. Fa inona no mahaforona taratasy? Diane Kelly Nuguid manambatra ity infografika ity mba hanomezana fanazavana amin'ny ampahany samihafa amin'ny taratasy amin'ny typography:
Glasary amin'ny teny Terminolojia Typography
Saingy misy zavatra betsaka kokoa momba ny zavakanto typography. Ireto ny lafiny rehetra sy ny toetra izay natao ho endri-tsoratra avy amin'ny Typographers.
Aperture - Ny habaka fanokafana na ampahany mihidy noforonina tamin'ny kaontera misokatra.
fara tampon'ny - Ny teboka mampifandray ambony indrindra amin'ny endrika taratasy ifaharan'ny kapoka roa; mety ho boribory, maranitra / maranitra, fisaka / mahamenatra, sns.
Arc of Stem - Fantsina miolakolaka izay mitohy misy tsorakazo.
Arm - Kapoka marindrano izay tsy mifandray amin'ny tahony amin'ny tendrony iray na roa.
bar - Ny lozam-pifamoivoizana misy ny litera A, H, R, e, ary f.
Bowl - Fantsina miolakolaka izay mamorona kaontera.
Counter - Ny habaka amin'ny ampahany na feno mihidy ao anaty toetra amam-panahy.
Vokovoko - Tsipika mivelatra manerana / amin'ny alàlan'ny foton'ny litera.
Taranaka - Ny ampahan'ny toetra amam-panahy indraindray midina ambanin'ilay sori-dalana, mazàna amin'ny ag, j, p, q, y ary indraindray j.
sofina - Ny lozam-pifamoivoizana kely izay miasa eo an-tampon'ny takelaka kely g.
Tongotra - Ny ampahany amin'ilay tsorakazo mijanona eo amin'ny sisiny.
Gadzook - Ny haingon-trano mampifandray ireo litera roa amin'ny Ligature.
Iraisana - Ny teboka mampifandray ny tapaka lalan-dra amin'ny taho.
mitarika ny - Ny elanelana misy eo anelanelan'ny tsipika andalana lahatsoratra iray mankamin'ny manaraka.
leg - Kapoka fohy, midina amin'ny taratasy.
fatotra - Taratasy roa na maromaro izay mifandray amin'ny endrika iray; voalohany indrindra haingon-trano.
manome fitoerana - Ny ampahany ambany amin'ny litera kely g.
serif - Ny vinavina manitatra ny kapoka lehibe ataon'ny olona iray. Midika ara-bakiteny ny Sans serif hoe 'tsy misy' Serif. Ny endritsoratra miorina amin'ny serif dia fantatra fa manampy ny olona hamaky haingana satria ny famaritana ny endrik'ilay teny no voafaritra tsara kokoa.
soroka - Ny kapoka azo avy amin'ny h, m ary n.
Milomano - Fanitarana haingon-trano na fikorotanana amin'ny endrika taratasy.
SAMPA - Ny lozam-pifamoivoizana mahitsy sy mitsivalana ao anaty litera (na diagonal rehefa tsy misy mitsangana).
tapaka lalan-dra - Tsipika mahitsy na miolaka izay mahaforona ireo bara, sandry, taho ary vilia baolina.
Terminal - Ny fiafaran'ny fikorotanana tsy misy serif; dia ahitana terminaln'ny baolina (boribory miendrika bika) ary finial (endrika miolikolika na misy tapered).
Vertex - Ny teboka eo ambanin'ny toetra amam-panahy ifanaovan'ny kapoka roa.
x-haavony - Ny haavon'ny karazan'olona mahazatra (tsy misy fiakarana na fidinana)
Janie Kliever no nanome ny faharoa infographic ho an'ny Canva miaraka amin'ny antsipiriany fanampiny. Tsindrio eo raha hitsidika ny lahatsoratr'izy ireo raha hijery hohonu ny tsirairay.
Fampahafantarana: Mampiasako ny rohy ifandraisako amin'i Canva ao amin'ity lahatsoratra ity.
Tags: nisara-fara tampon'nyarc ny tsorakazosandrymiakatraterminal terminalfisotroanafototravilia baolinacanvaMediaWikicross-tapaka lalan-drarazanaDiane Kelly Nuguidsofinamanaoendri-tsoratraendritsoratratongotragadzookJanie Klieveriraisanakerningnitarikaleghalavan'ny andalanamanome fitoeranaampahany amin'ny endritsoratratsy manana serifserif-tsoronyfeotapaka lalan-dramanosotraalalan'ny terminalvoambolanaTypographyglossary typografiatermografia typografiaVoambolanax-haavony